Omar oo la sheegay in uu tagi jiray baarka uu dadka ku laayay - BBC Somali
Omar oo la sheegay in uu tagi jiray baarka uu dadka ku laayay
Image caption booliiska oo lagu arkay banaanka meesha uu dilku ka dhacay
Wararka laga helayo dalka Maraykanku waxay tilmaamayaan in Omar Mateen oo ahaa ninkii weerarka ka gaystay baarka magaalada Orlando ee dalka Maraykanka in uu si joogto ah u booqan jiray goobtaasi wakhti dheer.
Wargaysyada gudaha iyo kuwa dibaddaba waxay soo xiganayaan macaamiisha kalaabkaasi oo sheegaya in ay marar badan arkeen Omar oo jooga baarka oo khamri badan cabaya.
Faahfaahinta ay masuuliyiintu ka bixiyeen weerarka
Masuuliyiinta magaalada Orlando ee dalka Maraykanka ayaa bixinaya faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan weerarkii kalaabka ka dhacay ee ay ku dhinteen 49 ruux.
Omar Mateen oo hubaysan ayaa rasaas ku furay kalaabka saacadihii hore ee subaxnimadii Axaddii, halkaas oo uu ka dhacay rasaasayntii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dambe ee dalka Maraykanka, waxaana ku dhaawacmay 53 ruux.
Taliyaha booliiska John Mina ayaa sheegay in askari aan shaqada ku jirin markaas balse kalaabka ka hawlgala uu Mateen rasaas waydaarsaday.
Intaas kaddib ayay booliis badani yimaadeen goobta ninka laga shakisanyahayna rasaasta ayuuna sii waday.
Waxay ku qasbeen in uu dib ugu gurto dhinaca suuliga halkaas oo uu la haysteyaal ku haystay sida uu sheegay Mina.
Intii arrintaas ay dhacdayna waxaa suurtagashay in lahaysteyaal badani ay baxsadaan
Image caption Cumar Mateen ayaa waxaa dhowr jeer su'aalo weydiiyay FBI.
Mateen ayaa booliiska la hadlayay markii uu suuliga ku jiray sida uu Mina sheegay, intii uu hadlayayna wuuxna booliiska u sheegay in uu taabacsanyahay kooxda isugu yeerta Dawladda Islaamka.
FBI ayaa horay u waraysatay Mateen
Image caption Obama ayaa weerarka ku tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa.